Maxkamada ICJ oo maanta go’aan hordhac ka gaareysa muranka Badda Somaliya Iyo Kenya – STAR FM SOMALIA
Maxkamada ICJ oo maanta go’aan hordhac ka gaareysa muranka Badda Somaliya Iyo Kenya
Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda (ICJ) ayaa Maanta lagu wadaa in ay ku dhawaaqdo go’aanka ay ka gaartay diidmada hordhaca ah ee Kenya ee ku saabsan dacwadda Somaliya ay ku dalbeyso in la cayimo soohdinta badeed u dhaxeysa Somaliya iyo Kenya.
Sida Somaliya ay dooneyso, haddii ay Maxkamaddu go’aan ku gaarto in ay dacwaddan hadda gasho waxay noqon doontaa in Kenya la siiyo wakhti ay ku diyaariso waxa ay isaga daafaceyso kiiska ay Somaliya ku oogtay Kenya.
Wafdi ka socda dowladda Somaliya oo uu hoggaaminayo Xeer Ialaaliyaha Qaranka Axmed Cali Daahir, Danjiraha Somaliya u fadhiya Brussels, Dr. Cali Faqi oo isagu ah wakiilka Somaliya ee dacwadda ayna wehliyaan Danjirayaal dhowr ah iyo Muna Sharmaan oo ah Qareen Somaliyed oo dacwaddan billowgeedii ilaa iyo hadda gacanta ku haysa sumcadna uga kasbatay Soomaali badan, ayaa dadaal dheeri ku bixiyay arintaan.
Galabta saacaddu marka ay tahay 5-ta Galabnimo wakhtiga Somaliya ayaa Guddoomiyaha Maxkamadda ICJ, Ronny Abraham, uu ku dhawaaqi doonaa go’aanka Maxkamadda.
Somaliya ayaa dacwadda u gudbisay Maxkamadda ICJ sannadkii 2014. Kenya waxay iyaduna Maxkamadda u gudbisay diidmo ay dooneyso in ay Maxkamadda ka hor istaagto in ay qaaddo dacwadda.
Badda ay isku haystaan Somaliya iyo Kenya ayaa bedkeedu yahay 142,000 km oo laba jibbaaran, Waxaana la rumeysan yahay aagga badweynta India ee ay Somaliya iyo Kenya ay lahaashaheeda ku muransan yihiin in uu ku jiro kheyraad badan oo dabiici ah oo uu ka mid yahay shidaal.
Dooda musharaxiinta oo mar kale la shaaciyay in dib loo qaban doono